Kodzero-dzevanhu, 27 Ndira 2017
Chishanu 27 Ndira 2017
MDC-T Yoendesa Zanu PF kuMatare Ichiti Yakaponda Vanhu Muna 2008?
VaGutu vanotiwo vari kuda kuendesawo kumatare bato reZanu-PF vachiripomera mhosva dzekuponda nhengo dzaro dzinosvika mazana maviri muna 2008 panguva yesarudzo.
Mafashamu eMvura Oparadza Zvivakwa muHarare
Meya weguta reHarare, VaBernard Manyenyeni, vashanyira misha inogara vashoma yeBorrowdale neGlen Lorne, vachiona kuparadzwa kwakaitwa dzimba pamwe nemidziyo nemafashamu emvura yakanaya neChina muHarare.
Nhengo dzeTajamuka Dzoratidzira neChishanu
Chikwata cheTajamuka chinoti chichange chichiratidzira mangwana (Chishanu) muguta reHarare vachitsutsumwa nekwavanoti kubatwa neseri kwemaoko kuri kuitwa vanotengesera mumigwagwa nekanzuru yeHarare nehurumende.
Transparency International Inoti Huwori Hwadzika Midzi muZimbabwe
Izvi zvinotevera zvakaburitswa mugwaro resangano reTransparency International rinotarisa huwori hwakaitwa nemunyika zana nemakumi manomwe nenhanhatu mugore ra2016 rakaburitswa nemusi weChitatu.
Mumiriri weBuhera South, VaJoseph Chinotimba veZanu PF, vabvunza gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, kuti sei hurumende iri kurega vanhu vachibirwa nevanhu vezvitoro nemabhanga.
Kanzuru yeHarare Yopa Matunhu Ayo Masimba
Kanzuru yeguta reHarare yapa masimba kumahofisi ayo ari mumatunhu ekuita mabasa akasiyana siyana akazvimiririra.
Hurumende Yotadza Kubhadhara Mabhonasi a2016
Makurukota ehurumende anosanganisira rezvevashandi, Amai Prisca Mupfumira, nere zvehutano, Dr David Parirenyatwa, pamwe nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe VaJohn Mangudya, vasangana nemasangano evashandi vehurumende kuti vazeye nyaya yemabhonasi egore rapera.